Maraoka: Vaovao farany momba ny sivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Janoary 2019 5:31 GMT
Moi, dans tous mes états (fr) namintina ny fahalalahan'ny aterineto (ary koa endrika hafa amin'ny media) tamin'ny lahatsoratra iray vao haingana:
Amin'ny andron'ny podcasts (fandraketam-peo) sy fandaharana hafa ao amin'ny aterineto, fitaka ny fandaminana izany. “Ary tonga amin'ny famintinana mitovy isika: efa very mialoha ny ady amin'ny fandaminana ny aterineto” hoy i Ahmed Ghazali. Ny safidy tsy mitsaha-mitombo amin'ireo karazana fandaharana sy fantsona rehetra dia mametraka fahasahiana lehibe ho an'ireo mpandraharaha [mpamokatra media] Maraokana amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity.
Mbola olana ihany koa ny fanivanana ny feon'ireo mpanohitra avy any Sahara Andrefana, bilaogy marobe avy amin'io faritra io no nakatona tany amin'ny faritra hafa ao Maraoka. Nanonona ny lahatsoratra navoakan'ny MAP (Gazety Arabo Maghreb=Maghreb Arab Press) vao haingana ny Freedom Writer, raha naneho hevitra momba ny lahatsoratry ny Human Rights Watch momba ny fahalalaham-pitenenana any Sahara Andrefana kosa i asvdh.
Na dia milaza aza ny lahatsoratry ny AFP fa manana fahalalahana bebe kokoa ireo bilaogera Maraokana raha oharina amin'ireo firenena Arabo sy Miozolomana, ny zava-misy amin'ny tsy fahafahana miditra matetika ao amin'ny Livejournal dia manaporofo fa mbola misy lalana tokony aleha. Araka ny voalazan'ny MoTIC, izay manana hihy (onglet) iray eo ambonin'ny tranokalany, fa mbola voasakana ihany koa ny Google Maps sy Google Earth. Lahatsoratra iray avy amin'i Matthew Helmke manonona tranonkala hafa voasakana toy ny OpenDNS, anonymizer.com, multiproxy.org, “ary indraindray YouTube.”